ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့် PENN ပြည်နယ်ကိုမုန်းသလဲ? - နှုန်းထားများ
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့် Penn ပြည်နယ်ကိုမုန်းသလဲ?
ငါကဒီမှာကျောင်းသားဖြစ်လာခဲ့သည်ကတည်းကအစဉ်အဆက်က Rutgers Penn ပြည်နယ်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ရွံရှာခဲ့ကြောင်းထင်ရှားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးဘောလုံးပွဲစဉ်တွင်ကျောင်းသားများသည်ရိုးရာတတိယအကြိမ်ရွတ်ဆိုသံနှင့်တူသောလက်ချောင်းသုံးချောင်းကိုလေထဲပစ်ချလိုက်ကြသည်။ အခြားကျောင်းသားများ FUCK PENN ပြည်နယ် '' '' ကြွေးကြော်လူအစုအဝေးကြားဖို့သာလက်ဝဲမှညာဘက်လေထုထဲတွင်မိမိတို့လက်ကိုရွေ့လျားသည်အခြားကျောင်းသားများကိုကူးယူ, ဂစ်တာ riffs ကစားသကဲ့သို့ငါတလျှောက်လိုက်ကြ၏။ တကယ်လို့ငါတို့က Penn State ကိုတကယ်ပဲကစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကအဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ငါလိုက်လျောညီထွေဖြစ်။ , Penn State တရားဝင်ငါ့ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးကျောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်စနေနေ့မှာမြို့ကိုမလာခင် Rutgers နဲ့ Penn State တို့အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုသမိုင်းအကျဉ်းကိုကြည့်ကြစို့။
အဆိုပါ Knights Penn ပြည်နယ်ဆန့်ကျင် 2-24 တစ် All- အချိန်စံချိန်ကိုင်ထားပါ
Rutgers သည် ၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင်ကျောင်းနှစ်ခုအကြားတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
အဆိုပါကျောင်းများ Penn ပြည်နယ် 15- ဂိမ်း 37 နှစ်အနိုင်ရတဲ့ Streak အပေါ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ 1950, သည်အထိနောက်တဖန်တွေ့ဆုံရန်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ နောက်ဆုံးတွင် Rutgers သည် ၁၉၈၈ တွင်ထပ်မံအနိုင်ရခဲ့သည်။
1995 ခုနှစ်တွင် Rutgers ဦး ခေါင်းနည်းပြ Doug Graber တစ် 59-34 blowout အရှုံးအတွက်ရမှတ်တက်ပြေးဘို့ Penn ပြည်နယ်ရဲ့ ဦး ခေါင်းနည်းပြ, Joe Paterno နှင့်အတူကြွေးကြော်သံပွဲသို့ရတယ်။
၂၀၁၄ သို့ရှေ့သို့အလျင်အမြန်ရောက်ရှိခဲ့သည့်နည်းပြဟောင်း Kyle Flood သည် Nitanny Lions ကို Penn State ဟုရည်ညွှန်းရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်းလက်ရှိ Penn ပြည်နယ်အကြီးအကဲနည်းပြဂျိမ်းစ်ဖရန့်ကလင်သည်ထိုနှစ်၌သူတို့၏အချိန်ဇယားကိုကျွန်ုပ်တို့မသိခဲ့ပါ
ဒီတော့ဘာကြောင့် Rutgers ကျောင်းသားတွေက Penn State နဲ့သူတို့ရဲ့ဘောလုံးအသင်းကိုမုန်းတာလဲ။ ၃၇ နှစ်ကြာမိုးခေါင်မှုလား။ က Paterno ရဲ့သို့မဟုတ် Franklin ရဲ့မာနထောင်လွှားခဲ့သလား
ပြိုင်ဘက်နှင့် ပတ်သက်၍ Rutgers ကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းသားဟောင်းများကဤတွင်ပြောခဲ့သည်။
Penn State နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်သင်၏အကြံအစည်ကဘာတွေလဲ။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ သူတို့ကိုမုန်းတီးဖို့ကပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အသင်းတိုင်းကပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်လိုနေတယ်။ ပထဝီအနေအထားအရကြည့်လျှင်ယုတ္တိအရှိဆုံးသောရွေးချယ်မှုနှင့်တူသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သိလိမ့်မည်ဟုလည်း Vinny Caggiano ကပြောသည်
နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကကလေးတွေတော်တော်များများအဲဒီမှာသွားပြီးအထက်တန်းလွှာသဘောထားတွေရှိကြပြီး Penn State ကို Rutgers ထက်ပိုကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်လို့သူတို့ထင်ထားကြတာကိုကျွန်တော်မုန်းတယ်။ ဘောလုံး၏စည်းကမ်းချက်များအရသူတို့သည်သမိုင်းဝင်အောင်မြင်သောပရိုဂရမ်များရှိသည့်အတိုင်းပြုမူပြီး၊ အမျိုးသားဂုဏ်ထူးနှစ်မျိုးသာရရှိပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ သာမန်ပရိုဂရမ်များဖြစ်သည့် Nick Piezzo ကမှတ်ချက်ချသည်။
ငါဘွဲ့ရသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူတို့၏ပရိသတ်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည့်အခြေခံအားဖြင့်အခြားမည်သည့်ကျောင်းများထက်မဆိုသူတို့ကို ပို၍ မုန်းသည်။ ယခင်က ၂၀၀၅-၂၀၀၈ မှ Rutgers တွင်ခုခံကာကွယ်ကစားသူ Pete Tverdov ကပြောသည်
ဟုတ်ပါတယ် Sandusky နဲ့အတူတစ်ခုလုံးကော၊ ကျောင်းပြီးသွားရင်မင်းဘယ်လိုမုန်းမလဲ။ သူတို့သင်တစ်ခါတစ်ရံတစ် ဦး အစွန်းရောက်နေတူသောဒါဟာပဲပုံရသည်? သူတို့က Joe Paterno နဲ့အတူဉာဏ်အမြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့ဘောလုံးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်။ ငါကပဲပရိသတ်တွေနှင့်အတူတစ်ခုခုချွတ်တူသောပုံရသည်မသိရပါဘူး, Caggiano ကဆိုသည်။
စနေနေ့က PSU ကိုအနိုင်ရတာကမင်းအတွက်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲ။
စနေနေ့ကသူတို့ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းသည် Penn State ကိုစစ်မှန်သော Big Ten အသင်းအဖြစ်တရားဝင်ဖြစ်စေပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင်သိသာထင်ရှားသည့်အသင်းတစ်သင်းကိုရှုံးနိမ့်ခြင်းအားဖြင့် Penn State ကိုအရှက်ရစေသည်။ Piezzo ကရှင်းပြသည်မှာသူတို့ကသူတို့ဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းမရှိသော်လည်း PLAYOFF ပုံသဏ္ဌာန်ပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်ချက်များကိုလည်းအဆုံးသတ်စေခဲ့သည်။ ပရိသတ်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အထက်တန်းလွှာသဘောထားကြောင့်သာအခွင့်အရေးရှိသည်ဟုထင်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟု Piezzo ကရှင်းပြသည်။
ဒါဟာ [Rutgers များအတွက်] သမိုင်းဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဒီရာသီကျွန်တော်တို့ရဲ့စံချိန်နှင့်သူတို့ရှိခြင်းသောစံချိန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြီးမားတဲ့စိတ်ဆိုးဖြစ်လိမ့်မယ်, ကျိန်းသေကျွန်တော်နောက်တဖန်အဘို့လယ်ပြင်မုန်တိုင်းတစ်ခုခု, Rutgers အကြီးတန်းဆမ် York ကပြောသည်။ Rutgers နှင့် Penn State တို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီးကောလိပ်တက်ချိန်တွင်ဤကျောင်းနှစ်ခုကြားလူအများစုကဆုံးဖြတ်ကြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်သည်အလွန်အောင်မြင်လိမ့်မည်။
C'Ggiano ကဤသည်သည် Louisville ကို '06 '၌ပြန်လည်ရိုက်နှက်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ကျောင်း၏အအောင်မြင်ဆုံးအနိုင်ရရှိမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Penn State သည်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကဒီပရိုဂရမ်အတွက်အချိန်အတော်ကြာဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါပဲ၊
Penn State ကျောင်းသားများကအပြိုင်အဆိုင်စိတ်ကူးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ ဤတွင်ရန်သူထံမှတိုတောင်းသောမှတ်ချက်အနည်းငယ်။
Penn State ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျောင်းနှစ်ခုအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်သင်ဘယ်လိုခံစားရသလဲ။
ငါမတည်ရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမိုက်မဲရဲ့ထင်, Aimee Goldstein ကဆိုသည်
ဗစ်တာဂျိုးဇက်က Rutgers သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ PSU ကိုမရိုက်သေးပါ
အကယ်၍ Rutgers သည်စနေနေ့တွင်အနိုင်ရပါက၎င်းသည်သင်၏ဘဝအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်မည်လော။
ကြီးမားပေမယ့် Rutgers ကိုသွားမယ့်ငါ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးဟာတကယ်ကိုဆိုးဝါးတဲ့အရာတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ အားလုံးမဟုတ်ပါ, Goldstein ကဆိုသည်
အဘယ်ကြောင့် Rutgers ကျောင်းသားများ Penn ပြည်နယ်ကိုအလွန်မုန်းထင်ပါသလဲ
သူတို့ကမနာလိုနေ, Bridget က Cahill ကဆိုသည်။
သူတို့ဟာဒီနှစ် Big Ten မှာဘောလုံးအစီအစဉ် 0-7 ရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့ရွေးချယ်တဲ့ကျောင်းကစိတ်မကောင်းပါဘူး၊
အားလုံးမဟုတ်ပါ, Skoog ကဆိုသည်
ဒီတော့အဲဒီမှာမင်းမှာရှိတယ်။ အဘယ်ကြောင့် Rutgers Penn ပြည်နယ်နှင့်၎င်းတို့၏ဘောလုံးအစီအစဉ်ကိုဤမျှလောက်မုန်းသနည်း ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ငါဟာ fuck ဆိုတဲ့သဲလွန်စမရသေးဘူး။ ငါမည်သူမဆို Rutgers Penn ပြည်နယ်ကိုမုန်း၏အကြောင်းပြချက်အတိအကျသိတယ်ထင်နှင့်မည်သူမဆိုဂရုစိုကျမစဉ်းစားကြဘူး။
ဘယ်လောက်အဘို့အ vyvanse ရောင်းဖို့
ကောင်းပြီ, ငါတို့ Penn ပြည်နယ်မသိရပါဘူး။